Jadwalka doorashada Aqalka Sare ee HirShabelle (Aqriso) - Caasimada Online
Home Warar Jadwalka doorashada Aqalka Sare ee HirShabelle (Aqriso)
Jowhar (Caasimada Online) – Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee HirShabeelle ayaa soo saaray jawdalka doorashada xubnaha Aqalka Sare ee BFS ka soo gelaya HirShabeelle, taas oo la guda geli doono Khamiista berri ah, sida ku cad jadwalka.
Ugu horeyn guddiga ayaa jadwalkaan ku sheegay in Khamiista berri ah ee 9-ka bishan September illaa maalinka Sabtiga ah ee 11-ka bishaan ay socon doonto ‘qabashada araajida iyo diiwaan gelinta musharaxiinta u tartameysa kuraasta Aqalka Sare’ ee yaalla Jowhar.
Sidoo kale maalinka Axada ah ee 12-ka bishaan ayaa loo balansan yahay in musharaxiinta laga dhageysto hadal jeedintooda. Halka maalmaha Isniinta, Talaadada iyo Arbacada ay socon doonto doorashada xubnaha Aqalka Sare ee HirShabeelle ku metelaya dowladda federaalka.
Madaxweynaha HirShabelle Cali Guudlaawe ayaa maanta soo saaray liiska musharixiinta 8-da kursi oo ay HirShabelle ku leedahay Aqalka Sare ee Soomaaliya.
Liiska Musharixiinta ee uu soo saaaray Cali Guudlaawe ayaa waxaa ka muuqda inuu yahay liis furan oo ay ku tartami doonaan siyaasiyiin miisaan ku leh siyaasadda Soomaaliya, waxaana kursi kasta ku tartamaya ugu yaraan seddax illaa afar musharax.